9 Meelo loogu talagalay Sameynta Bogagga
by Tom Nelson iyo Mary F. O'Connor
Ku ilaali caruurta mashquul iyo farxad boggooda sawir gacmaha iyo bogashada
Midabaynta daabacan iyo midabada daabacan waa hal dariiqo oo qof walba uu ku faraxsan yahay (ama ugu yaraan la qabsado) halka Cuntada loo yaqaan "Thanksgiving cookie" la kariyo. Boggaga internetka ee hoos ku qoran waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo dayrta - ama boggaga firfircoon ee loo yaqaan 'Thanksgiving-themed pages' iyo 'activity' kuwaas oo ah in lagu dhufto gacmaha gacmaha yar si mashquul ah. Xaalado badan, caruurtu waxay midabada ku dhejin karaan ama waxay ku dhamaystiri karaan dhaqdhaqaaqaaga kombuyuutarka halkii warqad, haddii aad doorbidayso.
Sheekooyinka rinjiinta ee boggaga Crayola
Marka ay timaado midabaynta, Crayola ayaa qoray buugga. Websaytka Crayola wuxuu bixiyaa wax ka badan daraasado midabeyn iyo bogag waxqabad, oo ay ka mid yihiin shan boono boono. Waxaad daabacan kartaa mid kasta oo ka mid ah bogagga, ama waxaad ku sawiran kartaa internetka, adoo isticmaalaya qalfoofyada digital, qalin, iyo calaamado. Marka laga soo tago midabaynta turkiga, dadka, iyo cunnooyinka, carruurtu waxay sawiraan wajiyo, abuuraan kaararka Thanksgiving iyo goobaha goobta, qor farriinta Thanksgiving, gooyaan, midabka, iyo isu-ururinta waraaqaha waraaqaha ah. More »
Beesha Waxqabadka: Waalidiin Waalidiinta
Goobtan UK-ku salaysan waxay bixisaa boggaga sawirada, Thanksgiving bogga, ciyaaraha, daabacadaha, puzzles, iyo jimicsiga carruurta da'doodu tahay. Bogagga midabaynta waxaa ka mid ah wiilasha iyo gabdhaha Halyeeyaha ah iyo gabdhaha, maraakiibta Pilgrim, turkiga, iyo Cuntada Thanksgiving. Boggaga farshaxanka ayaa muujinaya caruurta sida loo sameeyo koobi jimicsi ah iyo hindhisooyin, turjumooyin gacmo furan, dambiisha beergooyska, miraha tufaaxa macmacaanka cusbo, iyo geedo mahadnaq ah. Bogagga la daabacay waxaa ka mid ah casharada sawirada, puzzles acrostic, mazes, baaritaanka ereyada, ereyada ereyga, qalabka qoritaanka qoraallada iyo waraaqaha, iyo naqshadaha waraaqaha xajinta. More »
PaperToys: Qorshaha Turkiga ee Thanksgiving
PaperToys.com ayaa ku takhasusay waraaqaha iyo noocyada waraaqaha, qaar ka mid ah kuwaas oo si cad u faahfaahsan. Websaytka PaperToys.com waxay muujineysaa qaabka midabka noocyada turkika ah ee turjumidda, laakiin tixraaca daabacan waa madow iyo caddaan kaliya. Ma aha heshiis weyn, laakiin qaabkani wuxuu noqon karaa mid xoogaa ka badan oo darsi ah haddii aadan u baahnayn inaad midab u yeelato midab leh, qalin midab leh, ama calaamado. Weli, waa mashruuc xiiso leh, waana inay carruurta ku mashquulaan ugu yaraan 5 daqiiqo. Carruurta yaryar waxay u baahan karaan kormeerka maqaarka iyo caawimaad yar oo leh jarista iyo lakabka. More »
AllKidsNetwork: Waraaqo Qoraal ah oo loogu talagalay carruurta
Haddii aad saxdaa, waxaad dhejin kartaa xaashiyo warshadeed oo ka mid ah bogagga midabada iyo ciyaaraha Bingo. Bogga shabakadda AllKidsNetwork waxay leedahay ururinta waraaqaha shaqada oo ah mid xiiso leh maadaama ay yihiin waxbarasho. Carruurta yar yar, waraaqaha shaqada waxaa ka mid ah barashada tirinta, isku mid / kala duwan, iyo ciyaaraha sawirada. Carruurta waaweyn, waraaqaha shaqada waxaa ka mid ah erayada ereyada, raadinta erayada, waraaqo maqan, farshaxanka 'Decoder decoder puzzle', iyo laylinta isku dhafka iyo kala goynta. Waxaa jira 22 waraaqo shaqo oo dhan. More »
Warshadda Sicirada: Sawirada sawirada
Bogagga daabacan ee bogga shabakadda Plimouth Plantation waxay ka kooban yihiin qaar ka mid ah bandhigyada laga heli karo Plimouth Plantation ee Massachusetts. Qaar ka mid ah sawirrada ayaa ku jira Felix, oo ah kalluunka Mayflower. Inta aad ku jirtid bogga shabakada Plimouth Plantation, hubi inaad isku xirto "Sida Qalabka Lacageed" qaybta Just For Kids ee qaybta gacanta bidix, si aad u ogaatid waxa loo yaqaan "Pilgrims" oo lagu magacaabo bisadaha, dharka, iyo dabka, iyo waxyaabo kale. More »
TheTeachersCorner.net: Sheekooyinka Raaxeynta Shukriga
Waxaa jira in ka badan laba dijitaal oo sharaf leh boggaga sawirada si ay u doortaan TheTeachersCorner.net. Sawirada waxaa ka mid ah bocorka, turkiga, Xajka, dhegaha hadhuudhka, iyo cornucopias; sawirada intooda badan waxaa ka mid ah salaan sharafeed. Bogga waxaa sidoo kale ku jira dhowr bog oo joornaal ah oo la yiraahdo Thanksgiving oo carruurtu isticmaali karaan si ay u bilawdaan ama dayactiraan ama u qoraan sheekooyinka; tilmaan la daabacay si aad u sameysid sanduuq si aad u qabato nuts ama nacfac yaryar; raadinta erey la daabacan iyo xujada ereyada; iyo kaararka waxqabad ee daabacan. More »
Macluumaadka Xisaabaadka Macallinka: Macalimiinta Qorshaha mahadnaqa
Macallimiin Macallimiin ah
Websaytka "Super Teacher Worksheets website" waa jilitaan oo ay ka buuxaan dhaqdhaqaaqyo waxbarasho iyo xiiso leh. Marka la eego waraaqaha waraaqaha sawirrada maskaxeed, yoolka ayaa ah in la xalliyo isku darka, kalagoynta, isku dhufashada, ama kala qaybinta, ka dibna adeegso jawaabaha iyo furaha midabka ee hoose ee bogga si ay u midhooto turulka. Waxaa jira saddex warqadood oo ku saabsan hingaadka Shahaadada ee Thanksgiving ee ardayda fasalada labaad oo ardayda ka hor istaagaya inay ereyada khaldan ka dhigaan oo ay ku xalliyaan nidaamka xarfaha elektarooniga ah, oo ay weheliyaan sheeko gaaban oo loo yaqaan 'Thanksgiving puzzle words, search word, and crypto-code rid. Waxaa sidoo kale jira Thanksgiving Bingo game, iyo tilmaamo lagu gooyo oo lagu soo ururiyo Diimaha kale. More »
Kidzone: Mahadsanid Qaadashada Xisaabaadka Xisaabta
Kidzone waxay leedahay qoraallo daabacan oo loogu talagalay xisaabinta mahadcelinta iyo dhibcaha ereyada ee carruurta fasalada 1 ilaa 5aad. Dhibaatooyinka xisaabta waxay daboolayaan asaasiga (iskudarka, kalagoynta, isku dhufashada, iyo kala qaybinta), iyo sidoo kale fikradaha kale, sida qaadista nambarada, helitaanka qodobo la waayay, la shaqeynaya jajab tobanle, iyo kala qaybsanaan iyo iyada oo aan la heynin. Warqad kasta oo sheeko kastaa waxay leedahay sawir muujinaya lana yareeyo walaaca ka qabashada xisaabta, xiitaa hadday tahay wax yar. Waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan oo waraaq kasta oo shaqo ah adoo gujinaya "Generate Worksheet" oo ku yaal bogga sare ee bogga shaqada.
Bogga internetka ee Kidzone ayaa sidoo kale leh baaritaano, bogag midab leh, iyo daabacado kale oo loogu talagalay carruurta da 'kasta. More »
Xirfadaha Ciidaha iyo Abuuraha: Sameynta Bogagga Saaxiibtinimada
Xirfadaha Ciidaha iyo Abuurista
Inkasta oo Dayax-gacmeedyada iyo Abaabullada kaliya ay bixiyaan laba bog oo midabo leh, waxaan runtii jeclaanay bogga xayeysiiska ah. Way ka duwan tahay wax kasta oo aan ku aragno boggaga kale; Hore, weli kuma jirto turkey. Waxba kama qabno turkiga, laakiin waxaa jira siyaabo kale oo badan oo loo metelayo Thanksgiving iyo xilliga dayrta, iyo wax aan caadi ahayn markasta oo isha ku haya. More »
Websaydhyada kaa caawin kara inaad seexdaan si fiican
Dhageyso Raadiyaha IceCast Radio Isticmaalka Isticmaalka VLC Media Player
Isticmaalka MyYoooo ah Aqoonsi RSS
Qalabka Shirarka Wareega ee Webka ee Mac
Waa inuu leeyahay barnaamijyada loogu talagalay carruurta 5aad iyo hoos
5 Tilmaamo loogu talagalay samaynta qaboojiyaha casriga ah
8 Muuqaalka ugu fiican ee loogu talagalay dadka da'da yar
Kusoo Bixi 6 Waddooyinkood oo Lacag Lacag Leh Lagu Sameeyo Galka Telefoonkaaga
Macaamiisha "swapon" iyo "swap" Amarada Linux
Sida Loo Helo Gmail ee Muuqaalka (Isticmaalka POP)
8da ugu fiican ee 360-degree ee VR Games-ka oo lagu iibsado 2018
Dulmarka Nambarka Serial iyo Taariikhda Taariikhda ee Excel
Sida loo tirtiro Taariikhda Browsing Internet Explorer 8
Sidee loo Xaqiijiyaa D3dcompiler_42.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Badbaad-Nolol: Khiyaamada Khiyaamada Xeelad-Xeeladeed Codsiyada Su'aalaha & Tilmaamaha PC
Samaynta Filimada Ilmaha
Maxay yihiin Adware iyo Spyware?
Nidaamka Bixinta Macluumaadka
10-tii ugu fiicnayd ee Wi-Fi USB Adapters si ay u iibsadaan 2018
Google Spreadsheets TABABAR LAGU HELAA Waxqabadka Taariikhda iyo waqtiga xisaabinta
Sida Loo Isticmaalayo Ereyga Heerka Tilmaamaha Email ee Muuqaalka
Waa inuu lahaadaa Sawirada Sawirada Sawirada
Sida loo abuuro Email Saxiixa Muuqaalka 2007
Baro Habka ugu fudud ee Lagu daabici karo fariin gaar ah ee Email Gmail
Xatooyo Xoog Leh Dhuxulo Maqa Khafiif ah - Jinsi Mini-Game
Sida loo tago Yahoo! Si toos ah ugaga soo baxa Yahoo! Raadi sanduuqa
9 -ka koobiyood ee ugu fiican ee lagu iibsado 2018 ee ka hooseeya $ 2,000